युरोप भ्रमणमा रहेका कांग्रेस नेता पौडेललाई कार्यकर्ताले खुला पत्र लेख्दै भने- तत्काल युराेप छाड ! (पत्रसहित) | mulkhabar.com
September 22, 2018 | 6:00 am 667 Hits
आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले भोगेको पराजयपछि युरोप भ्रमणमा आउने तपाई पहिलो वरिष्ट नेता हुनुहुन्छ । देशमा जस्तै विश्वभरि छरिएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तामा केही निराशा छ ।
गत हप्तादेखि तपाईको युरोप भ्रमणपछि यहाँस्थित नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तामा आशाको किरण देखिएला भन्ने आशामा थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनको क्रममा मेरो आफ्नै जिल्लामा तपाईलाई बाग्लुङ प्रहरीले जेल हालेको अझै झलझली मनमा आउँछ । तपाई पार्टीभित्रको आर्दश पुरुष र एक अभिभावको रुपमा लिएको थिएँ ।
सन् २००० सालसम्म तपाईजस्तै देशको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने सपनासहित नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा थिएँ । बाग्लुङ जिल्लाको नेपाल विद्यार्थी संघको २ कार्यकाल अध्यक्ष, धवलागिरी बहुमुखी क्याम्पस मा ४ बर्ष सभापति र दुई कार्यकाल स्ववियू, फोरम केन्द्रीय सदस्यमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । देशमा भएको चरम द्वन्द्वका कारण गाउँ बस्ने अवस्था थिएन । विदेश भित्रिएँ । तर देश छोडे पनि नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त र आर्दश र क्रियाशीलता भने छोडेको छैन ।
पार्टी र संस्थाका वैधानिक निर्णयलाई कहिल्यै चुनौति दिने प्रयास त के सोच्न पनि सकेको छैन् । तर नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको परिपत्रबाट तत्कालीन विदेश विभाग प्रमुख सुजाता कोइरालाबाट स्थापित वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा तत्कालीन वरिष्ठ नेताबाट प्रथम अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको नेपाली जनसम्पर्क समिति युरोप शाखाप्रति तपाईले देखाउनु भएको रवैयाले युरोपस्थित नेपाली कांग्रेसजनको मन दुःखेको पक्कै छ ।
यो संस्था स्थापना कालदेखि हालसम्म तपाई पार्टीभित्रकै वरिष्ठ नेताको रुपमा हुनुुहुन्थ्यो । नेपाली जनसम्पर्क समिति युरोपको आयोजनामा तपाई समेत पटकपटक उपस्थित भएर कार्यक्रम गर्दै आउनु भएको त विदितै होला । ती सबै पार्टीमा दस्तावेजमा सुरक्षित छन् । तर अहिले युरोप भ्रमणले त्यस्तै के मन्त्र दियो तपाईलाई र युरोपमा कांग्रेस होइनन् र छैनन् भन्दै हिड्नु भयो ?
गत आइतवार लक्जम्वर्गमा सुरु भएको नेपाली जनसम्पर्क समितिको पहिलो अधिवेशनको आधिकारिक प्रतिनिधिको रुपमा नेपाली कांग्रेसले मलाई तोकेको हो । तपाईलाई प्रमुख अतिथिको रुपमा बोलाइएको हो । तर पार्टीको परम्परा र तपाईको आफ्नै आर्दशलाई समेत कुल्चेर पार्टीको पत्रलाई बेवास्था गर्दै मलाई केन्द्रीय प्रतिनिधि तपाईले स्वीकार गर्नु भएन।
मजस्तो विदेशिएको सानो कार्यकतासँग तपाई जुहारी खेल्न मैदानमा उत्रिनु भयो । यस्तो कार्यले तपाईको प्रतिष्ठा अवश्य बढ्दैन् । तपाईमाथि सानो चित्त (परेवाको जत्रो छाती) भएको नेताको आरोप नलागेको पनि होइन्, त्यसलाई युरोपमा आएर आफैं प्रमाणित गर्नु भयो । पार्टीको पद्धति मिचेर, आफ्नो गुटभित्रका केही सीमित मान्छेको कुरामा रमाएर युरोपमा विगत ११ बर्षदेखि सक्रिय पार्टी संगठनलाई निस्तेज पार्ने सुझाव कस्ले दियो तपाईलाई ?
नेपाली कांग्रेस को १२औ र १३औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा मन्तव्य राख्ने र प्रतिबेदन समेत स्वयम् मबाटै महामन्त्रीको हैसियतले बुझाइएको समेत स्मरण गराउन चाहन्छु । जुन–जुन देशमा तपाईले अहिले आतिथ्यता पाउनु भएको छ ती देशमा बनेका जनसम्पर्क समिति यही युरोप समन्वय समितिको सकृतामा बनेका हुन् ।
अल्ली ठूलो चित्त बनाउनु होस् । सबैको नेता बन्नुहोस् । बेल्जियममा आयोजित नेपाली जनम्पर्क समितिको अन्तरकृया कार्यक्रममा आएर तपाईका कुरा सुन्ने रहर थियो तर, मजस्ता सयौ कार्यकर्ताको मन दुखाउनु भयो । फलस्वरुपमा हल पूरै खालीजस्तै हुन पुग्यो । दुःखी छु दाई । तपाईलाई नेपाली जनम्पर्क समिति युरोपको अस्तित्व स्वीकार गर्नुनै थिएन भने अल्ली दरो मुटु बनाएर सभापति शेरबहादुर देउवा वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा किन बोल्नु भएन् ।
यो संस्था आज फेसबुकबाट घोषणा गरेर बनेको होइन् । तपाई कहाँ हुनुुुुहुन्थ्यो ११ वर्षसम्म भनेर सोध्ने कार्यकर्ता पनि छन् । सधै आर्दश र सिद्धान्तको कुरा गर्ने व्यक्तिको छाती फराकिलो हुनुपर्छ । उमेरसँगै नेपाली कांग्रेसको सकृय राजनीति गर्ने दिनप्रति दिन घट्दै छन् । अब यो बेला सकेसम्म नाम कमाउने, जीवन भर दुःख गरेर बनाएका साथिभाइ, तथा कार्यकर्ताको मन जितेर बस्ने बेला हो । सकेसम्म एकजना बढी मलामी बढाउन कोसिस गर्ने समय हो ।
तपाईंलाई नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनकााे चासो पनि सुरु भए होला । त्यसैले लाग्दो हो अर्को समूहलाई सिध्याउनु पर्छ । तपाईका वरिपरिले पनि त्यही सुझाएका होला । त्यो सबै भ्रम हो । जीवनभरि दुःख गरेर कमाएको रामचन्द्र पौडेलका आर्दशलाई बचाई राख्नुहोस् । आफु सकिने बाटो होइन् गन्तव्यमा पुग्नेतिर लाग्नुहोस् । युरोप भ्रमणलाई सहज बनाउदै समय छोट्टाउदै नेपाल फिर्ता हुनुहोला । यात्राको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु ।